Nabi Luud C.S. - Wikipedia
Nabi Luud C.S.
Nabi Luud C.S. waa mid ka mid ah nabiyada Alle,
Nabi Luud (N.N.K.H) waxa weeye wiilkii uu adeerka u ahaa Nabi Ibraahim Al-khaliil. waxaana Eebe u diray magaalo la dhaho Saduum, oo iminka loogu yeedho Badda dhimatay.
Qoomkii Nabi Luud waxay ahaayeen gaalo, balse waxa u dheeraa inay ahaayeen qoom akhlaaqda iyo fidrada basharka ka baxay, waxa Ninku ugalmo tagi jirey Nin kale. Waa caado aan hore uga dhicin basharka dhexdiisa iyo xataa xayawaanaadka kale.
Eebe waxa uu abuuray waxa uu ka dhigay lammaane, Raga iyo Dumar sidoo kale xayawaanada, dhirta, roobka iyo makhluuq kasta waxay leeyihiin lamaane waa Lab iyo Dhidig, waxaanu ugu talo galay in labka iyo dhidigu ay is guursadaan oo iskugu tagaan hab ku haboon, laakiin qoomkani way khilaafeen fidrada basharka.
Ficilkan foosha xun waxay ku samayn jireen dadka hortooda, waana layskugu faani jiray, ceebna agtooda umay arkeyn.
Awowgii Terax iyo ina Ibraahim (Aabraam) walaalkiis Haaraan; markaa, abti Ibraahim.
Waqtigan gudihiisa Luud iyo reerkiisa waxay degganaayeen magaalada Sodom. Luud xaq buu ahaa muuna noqon sida dadka sinada badan ee Sodom. Markuu Yehowah goʼaansaday inuu xukunkiisa ku soo dejiyo magaaladaas wuxuu Luud u soo diray malaaʼigo siday digniin u siiyaan. Malaaʼigihii waxay Luud iyo reerkiisa ku deddejiyeen inay Sodom ka qaxaan oona dib u eegin. Ilaahay samada wuxuu ka soo daayay baruud iyo dab siduu u halaago dadka degganaa Sodom iyo magaalada u dhow oo sharka leh Gomora. Luud iyo labadiisii gabdhood way baxsadeen. Haddaba naagtiisii gadaal bay eegtay malaha iyadoo xiiseynayso waxyaalihii ay ka soo tegeen. Dhega adayggan aawadeed nolosheedii bay ku lumisay.
Ilaahay Axdi Ayuu Ibraahim la Dhigtay
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Nabi_Luud_C.S.&oldid=225427"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Diseembar 2021, marka ee eheed 12:54.